21 Pashure pezvinhu izvi Jesu akazviratidza pachena kuvadzidzi vake pagungwa reTibheriyasi; asi akazviratidza pachena nenzira iyi. 2 Simoni Petro naTomasi, ainzi Mumwe Wemapatya,+ naNatanaeri+ wokuKana reGarireya nevanakomana vaZebhedhi+ nevamwe vaviri vevadzidzi vake vakanga vari vose. 3 Simoni Petro akati kwavari: “Ndichambonobata hove.” Ivo vakati kwaari: “Tichaendawo newe.” Vakaenda, vakakwira muchikepe, asi usiku ihwohwo hapana kana chavakabata.+ 4 Zvisinei, zvakwakanga kwava kuda kuedza, Jesu akamira pamhenderekedzo, asi chokwadi, vadzidzi havana kuziva kuti akanga ari Jesu.+ 5 Jesu akabva ati kwavari: “Vana vaduku, mune chokudya here?” Ivo vakamupindura kuti “Aiwa!” 6 Iye akati kwavari: “Kandai mambure kurutivi rwokurudyi rwechikepe uye muchawana.”+ Vakabva vaakanda, asi vakanga vasingachakwanisi kuakwevera mukati nokuda kwehove zhinji.+ 7 Naizvozvo mudzidzi uya aidiwa naJesu+ akati kuna Petro:+ “NdiShe!” Nokudaro Simoni Petro, achinzwa kuti akanga ari Ishe, akasunga nguo yake yepamusoro, nokuti akanga asina kupfeka, akasvetukira mugungwa. 8 Asi vamwe vadzidzi vakauya vari muchikepe chiduku, nokuti vakanga vasiri kure nenyika yakaoma, mafiti anenge mazana matatu chete, vachizvuva mambure ehove. 9 Zvisinei, pavakaburukira panyika yakaoma vakaona ipapo paine moto wemarasha+ uye pamoto pacho paine hove nechingwa. 10 Jesu akati kwavari: “Unzai dzimwe hove dzamuchangobva kubata.” 11 Naizvozvo, Simoni Petro akakwira muchikepe, akabudisa mambure, akaaisa panyika yakaoma azere nehove huru, zana nemakumi mashanu nenhatu. Asi kunyange pakanga paine zhinji kudaro mambure haana kuparuka. 12 Jesu akati kwavari: “Uyai musvusvure.”+ Hapana kana mumwe wevadzidzi akava noushingi hwokumubvunza kuti: “Ndimi ani?” nokuti vaiziva kuti akanga ari Ishe. 13 Jesu akauya, akatora chingwa, akavapa,+ uye ndizvo zvaakaitawo nehove dzacho. 14 Zvino iyi yakanga yava nguva yechitatu+ iyo Jesu akazviratidza kuvadzidzi pashure pokumutswa kwake kubva kuvakafa. 15 Zvino, pavakanga vasvusvura, Jesu akati kuna Simoni Petro: “Simoni mwanakomana waJohani, unondida here kupfuura idzi?”+ Iye akati kwaari: “Hungu, Ishe, munoziva kuti ndinokudai kwazvo.”+ Iye akati kwaari: “Dyisa makwayana angu.”+ 16 Akatizve kwaari, kechipiri: “Simoni mwanakomana waJohani, unondida+ here?” Iye akati kwaari: “Hungu, Ishe, munoziva kuti ndinokudai kwazvo.” Iye akati kwaari: “Fudza makwai angu maduku.”+ 17 Akati kwaari kechitatu: “Simoni mwanakomana waJohani, unondida kwazvo here?” Petro akashungurudzwa nokuti akati kwaari kechitatu: “Unondida kwazvo here?” Naizvozvo akati kwaari: “Ishe, munoziva zvinhu zvose;+ munoziva kuti ndinokudai kwazvo.” Jesu akati kwaari: “Dyisa makwai angu maduku.+ 18 Chokwadi, chokwadi ndinoti kwauri, Pawaiva muduku, waizvisunga chiuno uchifamba-famba kwawaida. Asi kana wakwegura uchatambanudza maoko ako uye mumwe munhu achakusunga chiuno+ achikuendesa kwausingadi.”+ 19 Izvi akazvitaura kuti aratidze kuti aizokudza Mwari+ norufu rworudzii.+ Naizvozvo, paakanga ataura izvi, akati kwaari: “Ramba uchinditevera.”+ 20 Petro paakatendeuka, akaona mudzidzi aidiwa naJesu+ achitevera, uya akanga azendamirawo pachipfuva chake pakudya kwemanheru, akati: “Ishe, ndiani ari kukutengesai?” 21 Naizvozvo, paakamuona, Petro akati kuna Jesu: “Ishe, zvakadiniko nomurume uyu?” 22 Jesu akati kwaari: “Kana ndichida kuti arambe aripo kusvikira ndauya,+ izvozvo zvinei newe? Iwe ramba uchinditevera.” 23 Naizvozvo, shoko iri rakapararira pakati pehama, kuti mudzidzi iyeye akanga asingazofi. Zvisinei, Jesu haana kuti kwaari akanga asingazofi, asi akati: “Kana ndichida kuti arambe aripo+ kusvikira ndauya, izvozvo zvinei newe?” 24 Uyu ndiye mudzidzi+ anopupura pamusoro pezvinhu izvi uye akanyora zvinhu izvi, tinoziva kuti uchapupu hwaanopa ndohwechokwadi.+ 25 Chokwadi, pane zvimwewo zvinhu zvizhinji zvakaitwa naJesu, izvo, kudai zvakanyorwa zvose chimwe nechimwe, ndinofunga kuti, nyika yaisagona kukwana mipumburu yacho.+